Safidy vaovao ao amin'ny safidin'ny MacOS Sierra Finder | Avy amin'ny mac aho
Safidy vaovao ao amin'ny MacOS Sierra Finder
Javier Porcar | | macOS Sierra, Tutorials
Taona maro lasa izay, nanararaotra ny tsy fahampian'ny safidy ny mpamorona mba hamoahana ny Finder "vitamina" izay hahatratra ny andrasan'ireo mpampiasa fitantanana rakitra be fatratra. Marina fa ny rafitra Apple dia manana fitaovam-piadiana miafina, ny fampiharana ny Automator hamenoana ny lesoka maro an'isa an'ny Finder. Na izany na tsy izany, indrindra ho an'ireo mpampiasa tsy dia matihanina loatra na tsy mila safidy tsotra fotsiny, Apple dia manapa-kevitra ny hanampy andraikitra vaovao amin'ny Finder ao amin'ny MacOS Sierra . Ireo no zava-baovao roa.
Fafao ireo entana ao amin'ny fako aorian'ny 30 andro: Mandra-pahatongan'ny Mac OS Sierra dia tsy misy ny fepetra hamafana ireo entana ao amin'ny fako matetika ary eo foana ny toerantsika raha hamafana ny vaovao avy hatrany mba tsy hanangona na hamela azy farafaharatsiny mandritra ny fotoana fohy raha toa ka tokony ampiasao indray. Ity asa ity mandeha ho azy ny famafana rakitra rehefa mijanona mihoatra ny 30 andro izy ireo. Hitanay ity fiasa ity amin'ny rindranasa hafa, toy ny fanesorana ny Sary amin'ny fampiharana teratany Mac sy IOS.
Tehirizo eo amboniny ny lahatahiry rehefa mandahatra ny anarany: Rehefa te-hitady rakitra isika, raha tsy fantatsika tsara izay tiana ho hita, ny zavatra mahazatra dia ny manomboka amin'ny zavatra mahazatra, hanohy hikaroka ao anatiny ary hiditra amin'ny fampahalalana takiana. Ohatra, te-hahita faktiora ho an'ny hetsika iray aho. Amin'ny ankapobeny dia mikaroka amin'ny alàlan'ny hitsin-dàlana fitendry Alt + Cmd + izahay ary mikaroka amin'ny anaran'ny hetsika. Hatramin'izao, ny fampahalalana dia aseho amin'ny alàlan'ny lahatahiry sy rakitra mirindra. Amin'ny fanaraha-maso an'ity safidy vaovao ity dia ho hitantsika ireo lahatahiry etsy ambony (izany hoe, voalohany) ary avy eo ny sisa amin'ny fampahalalana.
Amin'ny voalohany dia miafina ireo fiasa ireo. Raha te hampandeha azy ireo dia tsy maintsy miditra amin'ny Preferensi Finder isika ary manindry mandroso, izay ahafahantsika mampihetsika azy ireo.
Ireo fiasa semi-miafina ireo dia mandeha hatrany amin'ny fivontosana ny lisitr'ireo safidy vaovao 100 na 200 izay nambara taminay tamin'ny fivoahan'ny rafitra fiasan'ny tsirairay, ho hitantsika hoe firy amin'izy ireo no mbola ho hita ao amin'ny MacOS Sierra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Safidy vaovao ao amin'ny MacOS Sierra Finder
Fran Molina dia hoy izy:
Azo afenina indray mandeha ve ireo fanitarana rehetra sa hitohy amin'ny taona 1985?
Valiny tamin'i Fran Molina
Fotoana hanavaozana ny iPad-nao? Inona avy ireo safidy?
Ahoana ny fomba fametrahana sy fampiasana sticker amin'ny Messages ho an'ny iOS 10 (I)